काठमाडौं- ४ मा गगनमाथि भयो नसोचेको घटना! वाम गठबन्धनका कार्यकर्ता चकित ! - NepalPana
नेपाल पाना ६ मंसिर २०७४, बुधबार १५:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार गगन थापा अहिले घरदैलोमा व्यस्त छन् ।
बुधबार मैतिदेवी र कमलपोखरीमा घरदैलो गर्ने क्रममा गगनले मतदाताबाट कल्पना नै नगरेको माया पाए । कमलपोखरी चोकमा जब गगन आफ्नो घरदैलो टिमसहित अगाडि बढ्दैथिए । त्यहीबेला एक सर्वसाधारणले उनको टोलीलाई रोकेर आफ्नो घरमा लगेर भव्य स्वागत गरे । स्वागत पनि अनौठो तरिकाले गरे । पहिला माला लगाइदिए, त्यसपछि शिरमा ढाका टोपी लगाइदिए । त्यतिमात्रै जितको खुसीयालीजस्तै मिठाइ पनि खुवाए ।
काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि भोट माग्दै गगन अहिले आफ्ना विकासमा एजेण्डासहित जनताको घरघरमा पुगिरहेका छन् ।
यसैक्रममा बुधबार मैतिदेवी र कमलपोखरीमा घरदैलो गर्ने क्रममा गगनले मतदाताबाट कल्पना नै नगरेको माया पाए । कमलपोखरी चोकमा जब गगन आफ्नो घरदैलो टिमसहित अगाडि बढ्दैथिए । त्यहीबेला एक सर्वसाधारणले उनको टोलीलाई रोकेर आफ्नो घरमा लगेर भव्य स्वागत गरे । स्वागत पनि अनौठो तरिकाले गरे । पहिला माला लगाइदिए, त्यसपछि शिरमा ढाका टोपी लगाइदिए । त्यतिमात्रै जितको खुसीयालीजस्तै मिठाइ पनि खुवाए ।
यसरी गगनलाई अपार माया दिँदै ती मतदाताले जितको शुभकामना पनि दिए । ‘तपाईको जित निश्चित छ । तपाई नै जित्नुहुन्छ । हाम्रो आर्शिवाद छ । जितेर देश बनाउनुस्, आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई अझै द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुुस् ।’
जवाफमा गगनले मतदाताको आर्शिवादले म आज यहाँसम्म आइपुगेको र तपाईहरुको आर्शिवादलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्छु भनेका थिए ।